कोरोना महामारी, शिक्षा र हाम्रो जिम्मेवारी: एल बि बोहरा - साइपाल खबर
१५ भाद्र २०७८, मंगलवार ०८:५१ साइपाल खबरLeaveaComment on कोरोना महामारी, शिक्षा र हाम्रो जिम्मेवारी: एल बि बोहरा
एल बि बोहरा-हाँमी सबैलाई थाहै छ, कोरोना भाइरसको सुरुवाति संक्रमण सन २०१९ (डेसेम्वर) मा चिनको एक ब्यापारि शहर वुहान बाट भएको थियो । तत् पश्चात यसको प्रभाव चरणबद्द तवरले विश्वभर दिन दोगुना र रात चौगुना हुदै फैलियो । त्यतिबेला यसलाई न त छेक्न नै सकिन्थ्यो न रोकथाम गर्न नै । सम्भव भएका प्रयासहरु तथा रोकथामका उपाएका बारेमा विश्व स्वास्थ्य संगठनको अगुवाइमा संसारभर पहल त भए तर सबै निरर्थक साबित भए । यस बाट सुरक्षित हुने उपायका रुपमा सामाजिक दुरिको आवश्यकतालाई मध्यनगर गरियो र विश्वभर यसको लागु पनि तदारुकताका साथ गरियो । साथमा मास्कको प्रयोग लगायतका साबधानिका बारेमा समेत जनचेतनामुलक गतिविधिहरु अग्रभागमा संचालन गरियो । यसबाट बच्नका लागि कतिपय धर्मगुरुहरुले धार्मिक कर्महरु गर्न अह्र्याए । फलस्वरुप मठ्मन्दिरमा पूजापाठ गरियो, राँगाबोकाको बलिदिने काम भयो, शंख-घण्टको गुन्जन सुनाइयो र धामिझाक्रि कमाइयो पनि । एवम रुपेण, चर्च, मस्जिद, गुम्वा लगायतका शक्ति पिठहरुमा समेत संस्कार अनुसार पुजा पाठ गरियो । तर, हर प्रयासहरु केबल मन बुझाउने साधन त बने तर संजिवनी बन्न सकेनन् । एवम रितले दुनियाँ भर त्रासदीपूर्ण जनजीवन चलिरह्यो; लाखौंमा संक्रमण, हजारौंको मृत्यु तथा यस्तै यस्तै तथ्यांकको नालेबेलि सामाजिक संजालमा छताछुल्ल भइ नै रहे । जताततै चिन्ता र चाँसो, कतै निन्दा र भत्सर्ना त कतै भागाभागका दृश्यहरु देखिन थाले । पहिलो चरणको कोरोना केहि मत्थर भयो भनियो र जनजीवन केहि महिनाका लागि भए पनि सामान्य तिर फर्कियो । तर, ५\_६ महिना पछि फेरि अर्को चरणको सुरुवात कोरोनाकाल सुरु भयो, र त्यसले झनै मानव दुनियाँलाई तहसनहस पार्यो । हाल दोस्रो चरण पनि केहि कम भएको आभास गरिदै छ, तथापि अँझै तेस्रो चरणको चिन्ता गरिन थालिएको छ ।
विश्व दुनियाँलाई यसले अँझै झक्झक्याएकै छ । सारा जनजिवन प्रायः ठप्प छ । स्कूल तथा कलेजको पढाइ भौतिक उपस्थितिका साथ अझैं सम्भव हुन सकेको छैन । बजार तथा ब्यवसाय उच्च स्वास्थ्य सतर्कताका साथ आंशिक रुपमा खुले पनि अझैं ढुक्क हुने अवस्था छैन । नजिक तथा जिल्ला भित्रको आवतजावत सहज भइ सकेको भएता पनि टाढाको यात्रा अझैं उच्च सतर्कताका साथ गर्नुपर्ने बाध्यता छ । एक आपसको भेटघाट र सामिप्यता पनि अझैं सङ्कोच पूर्ण अवस्थाम छ । आफ्ना आफन्त र चिनजानकाहरु सँग समेत पनि बिरानो झैं ब्यवहार गर्नुपर्ने बाध्यता छ । नेपालकै सन्दर्भमा कुरा गर्दा दैनिक जसो औषतमा अढाइ हजार जतिमा संक्रमण तथा दुइ\_तीन दर्जन जतिको मृत्यु हुने गरेका खबरहरु सम्प्रेषण भइ नै रहेका छन । यो सबै बेथिति मँ कहाँ मात्र हैन तपाँइ कहाँ पनि छ, यहाँ मात्र हैन त्यहाँ पनि छ, स्वदेशमा मात्र हैन बिदेशमा पनि छ, पूर्व-पश्चिममा मात्र हैन उत्तर-दक्षिण तिर पनि छ; अँझै भनौ यो सबै तिर छ, किन कि यो महामारी हो, न भुतो न भविश्यति पहिचानको । मैले भने, महाँमारीको प्रभाव सबैतिर परेको छ । यो लेख मार्फत मैले कोभिड बन्दाबन्दिकामा शिक्षा क्षेत्रको अवस्था र यसले पारेको सकारात्म र नकारात्मक प्रभावका बारेमा चर्चा गर्ने प्रयास गरेको छु ।
प्रथमतः कुरा गरौं कोभिड-१९ मा शिक्षाको अवस्था र अवस्थितिको । जम्मा जम्मि दुई बर्ष जति भयो विध्यार्थीहरुले प्राकृतिक तवरले अध्ययन गर्न पाएका छैनन । कँतै राज्य पक्ष बाटै औपचारिक रुपमा नै बन्द गरीएका छन भने कतै सामान्यतयाः खुला भए पनि असुरक्षाको डरले अभिभावकले नै आफ्ना वालवालिकाहरुलाई स्कूल पठाउन मानेका छैनन् । यो अवस्था नेपालमा मात्र नभएर वश्वभरमै व्याप्त छ । युनिस्कोको सन २०१४ मा प्रकाशित गरेको आँकडा हेर्दा संसारभर झण्डै १.२९ बिलियन (जम्मा जनसंख्याको १७%) बालबालिकाहरु विध्यालय तहमा तथा १७७ मिलियन जति विध्यार्थीहरु उच्च शिक्षामा अध्ययनरत रहेका विवरण सार्बजनिक गरेको रहेछ । हालसालै युनिस्कोले झण्डै १.५२ बिलियन बिध्यार्थीहरु संसार भर कोभिड-१९ को बन्दाबन्दीका कारण विध्यालय बाहिर रहेका विवरण सार्वजनिक गरेको छ । सन २०२० मै विश्वभर झण्डै १६५ देशहरुले प्रत्यक्ष रुपमा विध्यालयहरु बन्द गरेका विवरण समेत सार्वजनिक भएको छ (द वासिङ्टन पोस्ट, मार्च २०२०) । यति मात्र हैन कोभिड महामारीका कारण हजारौंको संख्यामा विश्वभर रहेका विश्वविध्यालयहरु र तत् तत् माँतहतका कलेज\_क्याम्पसहरुका अध्ययन\_अध्यापन कार्य समेत प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा बन्द रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएका छन ।
नेपालकै सन्दर्भमा कुरा गर्दा गत सन २०२० देखि कोभिड महामारीका कारण सम्पूर्ण स्कूल तथा कलेजहरु बन्दि अवस्थामा छन (५\_६ महिना जति खुला भएका) । तथ्यांकीय हिसाबले हामी कहाँ झण्डै छत्तिस हजार भन्दा बढि स्कूल तथा चौध सय भन्दा बढि कलेजहरुमा (सन २०१६ को आँकडा) लाखौंको संख्यामा विध्यार्थीहरु अध्ययनरत छन । कोरोनाकालिन बन्दाबन्दिका कारण प्रायः सबै शैक्षिक संस्थाहरु हालसम्म पनि खुलेका छैनन् । तर, कहि कतै स्थानीय तहको पहलमा आंशिक रुपमा खुलेका भए पनि ढुक्क तरिकाले पढ्ने वातावरणको सुनिश्चितता अझै भइसकेको छैन । परीक्षाहरु हुन नसकेर स्वतहः ग्रेड अपको प्रणाली अवलम्वन गरिएको छ । कक्षा १२ को परीक्षा अझै पर्ख र हेरकै अवस्थामा छ । यस्तो अवस्थाका कारण हाम्रो शैक्षिक अवस्था कतातिर जाँदै छ, केहि भन्ने अवस्था अझै छैन । अव कुरा गरौं महामारीले शिक्षा जगतमा पारेको असरका बारेमा । ज्ञात नै छ, कोभिड महाँमारीले सबै तिर उत्तिकै प्रभाव पारेको छ । अँझै भन्दा यसको असर शिक्षा क्षेत्रमा अरु क्षेत्रको तुलनामा बढि नै पर्यो । त्यो किन पनि भने शैक्षिक संस्थाहरु भिडभाडका केन्द्र हुन । जहाँ बढि भिड त्यहाँ कोभिड भनिने उखानले नै प्रष्ट पार्दछ कि कोभिड महामारी र शिक्षालयहरु बिचको सम्वन्ध कस्तो छ भन्ने कुरा। विश्व दुनियाँ जस्तै नेपालका शैक्षिक संस्थाहरु पनि यसबाट अछुतो रहेनन् । भूगोलको हिसाबले नेपालका शैक्षिक संस्थाहरु हिमाली, पहाडी र तराइ गरी तीन तरहले अवस्थित छन र जस्लाई क्रमशः अति दुर्गम, दुर्गम र सुगमका नामले समेत बर्गिकरण गरिएका पाइन्छन । यो महामारीका बेला समग्रमा सबै खालका शिक्षालयहरु नराम्ररी प्रभावित भए । तर, तुलनात्मक रुपमा अति सुगममा अवस्थित शिक्षालयहरु भन्दा अति दुर्गम र दुर्गममा अवस्थितहरु बढि नै प्रभावित भए । ज्ञानको उब्जाउ तथा ज्ञान आदानप्रदानका केन्द्र मानिने शिक्षण संस्थाहरु नै यसरी बन्द भइदिदा समयको उकालिदो पथमा ज्ञानबिज्ञानका पाइलाहरु ओरालिने त हैनन भन्ने चिन्ता समेत गर्नै पर्ने बेला आएको छ । शिक्षण संस्थाहरु जहाँ दिनप्रतिदिन संस्कार, संस्कृति, मुल्यमान्यता, बोलिब्यवहार, चालचलन, सभ्यता, जनजिवन, जनजिबिका, आदि जस्ता मानविय कर्महरू सिकाइन्छन, ती समेत नराम्ररी प्रभावित भएका देखिन्छन । यो नै मुख्य चिन्ता र चाँसोको कुरा हो ।
कोभिड महामारीले शैक्षिक संस्थाहरुमा पारेको प्रभाव सँग धेरै कुराहरु यो या त्यो रुपमा जोडिएका छन । सबै भन्दा पहिलो कुरा त चेतनाको विकास नै हो । महामारीका बेला शिक्षा सँग सम्वन्धित ब्यक्तिहरु जस्तै शैक्षिक प्रशासन, शिक्षक, अभिभावक र विध्यार्थीहरुको चेतना मात्र प्रयाप्त हुन सक्दैन थ्यो । यो सँग थप जोडिएर आउने त राज्य पक्ष र मातहतका निकाय नै हुन । यहाँ राज्य पक्ष र मातहतका निकाय भन्नाले शैक्षिक संस्थाहरुलाई प्रत्यक्ष\_परोक्ष रुपमा नियाल्ने उपल्ला निकायहरु हुन, जस्ले शिक्षा सम्वन्धि नीतिनियमहरु बनाएर लागु गर्ने काम गर्दछन । थाहै छ, अपरझट आइलाग्ने कोभिड महामारी जस्ता विपतहरुमा नियमित रुपमा संचालनमा आएका नीतिनियमहरु कामयाबी हुदैनन् । यस्तो बेला त आकस्मिक तथा आपतकालिन रुपमा सहजिकरण गर्न सक्ने खालका नीतिनियमहरुको आवश्यकता पर्दछ । हामीले यसबारेमा ध्यान कत्तिको दियौं भन्ने कुरा यहाँ महत्त्वपूर्ण हुनजान्छ । हो, मैले उठान गर्न खोजेको चेतना र त्यसको सहि सदुपयोगको कुरा यहि नेर जोड्न खोजेको हो । चेतनाले एक आपसमा समन्वय गर्न सिकाउँछ । मलाई लाग्छ, सुगम क्षेत्रका सरकारहरुले शिक्षा सँग सरोकार राख्ने सबै पक्षहरु सँग समन्वय गरे र तत्कालै विकल्पका माध्यामहरुका बारेमा छलफल, बहस र अन्तरक्रिया गरी अगाडि बढे, र केहि मात्रामा भए पनि वालबालिकाहरुको सिकाइमा सहजता दिन सफल भए । यो उदाहरण मैले सहरबजारमा (काठ्माण्डौ, पोखरा, बिराटनगर, बुटवल, भैरहवा, नेपालगंज, सुर्खेत, धनगढी, महेन्द्रनगर, आदि) अवस्थित शिक्षालयहरुको दिन खोजेको हो, जहाँ अप्रत्यक्ष रुपमा सिकाइ पनि भइरह्यो र स्वास्थ्य सम्वन्धिको सचेतना पनि कायमै रह्यो । हो साप पनि मरोस लठ्ठि पनि नभाँचियोस भनेको यहि हो । तर, हिमाली र उच्च-पहाडी भूभागमा अवस्थित शिक्षालयहरुमा बैकल्पिक माध्याम बाट पढाइ गरिनु पर्छ भन्ने बारेमा सोचै गरिएन, छलफल नै चलाइएन । समग्रमा भन्नु पर्दा चेतनाको कमि र उत्तरदायीत्त्व बोध नै भएन भनौं । सबै ठाउँमा नेट इन्टरनेत नहुन सक्छ, स्थानीय रेडियोहरु त थिए नि । तिनको सदुपयोग गरेर अध्ययन\_अध्यापन गराउन सकिन्थ्यो । साँचो रुपमा भन्नु पर्दा प्रयास नै भएनन् । यस बारेमा सोच नजानुको अर्को एउटा कारण हो पढाइ भन्नाले विध्यार्थीलाई हुलका हुल कक्षाकोठा भित्र थुनेर पढाइ गरेर मात्र यथार्थमा सिकाइ हुन्छ भन्ने कुरा ठान्ने । यथार्थमा के त्यहि हो त ? पक्कै पनि हैन । यसबाट प्रस्ट हुन्छ कि आपतकालिन अवस्थामा हामी समायोजित हुन सक्छौ वा सक्दैनौ भन्ने कुरा ।
दुर्गम जिल्ला बझाङको कुरा गरौं । यहाँ बाह्र वटा स्थानीय तहहरु छन तथा सामुदायीक र संस्थागत गरी सयौं स्कूलहरु तथा आठ वटा कलेजहरु छन । बन्दाबन्दीको यो समयमा यहाँ स्थित स्थानीय तहहरुले बैकल्पिक शिक्षाका बारेमा सरोकार वालाहरु सँग एकसरो अन्तरक्रिया सम्म गर्न भ्याएनन् । सदरमुकाम नजिकका स्कूलहरुले त अन्लाइन माध्याम बाट समेत अध्यापन गर्न सक्थे, त्यसको सम्भावनाका बारेमा समेत सोचेनन् । जिल्ला भित्र छ\_सात जति त स्थानीय रेडियोहरु छन, तिनको सदुपयोग गरी केहि मात्रामा भए पनि वालवालिकाहरुको पढाइमा सहजिकरण गर्न सकिन्थ्यो, त्यो बारेमा समेत न त स्थानीय सरकारले न सरोकारवालाहरुले नै ध्यान दिए । के स्थानीय सरकारको काम जे जे माथिकाले अह्रयायो अमुक तरहले त्यै त्यै मात्र गर्ने हो र ? पक्कै होइन होला । तर हालको अवस्था सम्म हेर्दा त्यस्तै भइरहेको छ । स्थानीय तह र राज्य पक्षको लकडाउनका समयमा बन्द अझ थपिएको भन्ने सूचना मात्र प्रवाह गर्ने भए तिनको औचित्य माथि नै प्रश्न खडा हुनसक्छ । आशा छ, यसको यि र यस्तै गतिविधिका बारेमा जिल्लाभर समिक्षा हुन जरुरि छ ताकि यस्तै आपतकालिन समयमा राज्य पक्षले अभिभावकत्त्व गर्न सकोस ।
चाहे के गर्न सकिदैन भन्ने कुरा सुदूरपश्चिम विश्वविध्यालय बाट समेत सिक्न सकिन्छ । आउनुहोस, अव कोभिडका बेला सु.प. विश्वविध्यालयले कसरी बैकल्पिक माध्यामबाट आफ्ना दैनिक क्रियाकलापहरू संचालन गर्यो, त्यस बारेमा थोरै भए पनि चर्चा गरौं । कोरोनाकाल नेपालमा सुरु हुनै लाग्दा सु.प. विश्वविध्यालयको उपकुलपतिमा प्रा.डा. अम्मराज जोशी ज्युको पदासन भएको थियो । सुरुवाति चरणमा उहाँले बन्दाबन्दीमा कसरी पढाइलाई नियमितता दिन सकिन्छ भन्ने बारेमा आन्तरिक रुपमा विश्वविध्यालयका पदाधिकारी, प्राध्यापक र विध्यार्थी संघ\_संगठनहरु सँग छलफल गर्नु भो, तत् पश्चात बाहिरि देशको अभ्यासका बारेमा समेत अनवेषण गर्ने काम भयो । आवश्यक कुराको सुजबुझ पश्चात बैकल्पिक माध्याम बाट पढाइ गर्ने गरी निर्देशिका जारि भयो र कार्यरत सम्पूर्ण शिक्षक\_कर्मचारीहरुलाई त्यस सम्वन्धि तालिम समेत दिने काम भयो । विश्वविध्यालयमा आबद्द क्याम्पसहरु उच्च हिमाली भाग देखि तराई सम्मै फैलिएका कारण यो कार्य आफैमा चुनौतिपूर्ण थियो । त्यसको बारेमा समेत सम्भाव्यता अध्ययनका कुराहरु भए । अन्तत्त्वगत्वा बन्दाबन्दि सुरु भएको २\_३ महिना पश्चात नै अप्रत्यक्ष माध्याम बाट पढाइ र परीक्षा संचालनका कामहरु सुरु गरिए । यो क्रम आजका दिन सम्म पनि चलेकै छ । यति भनिरहँदा प्रष्ट हुन्छ, जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय । विध्यालय तहमा पनि सिकाइ सहजिकरणका लागि यस्तै तरहले केहि न केहि गरिनु पर्थ्यो भन्ने कुरा हो ।
कोभिड हामी जस्ता कुरा मात्र गर्ने काम नगर्नेका लागि महामारी साबित भएता पनि कतिपयका लागि अवसर साबित भयो । विश्वमा अकल्पनीय तरिकाले नयाँ नयाँ कुराहरुको सिर्जना भयो । अप्रत्यक्ष तरिका बाट सिकाइ सहजिकणका लागि जुम, गुगल मीट, माइक्रोसोफ्ट टिम, गुगल क्लासरुम, मुडल, आदि जस्ता साधनहरुको विकास भइ प्रचुर मात्रामा प्रयोगमा आए । नेपालका कतिपय शिक्षण संस्थाहरुले समेत यि साधनहरुका माध्याम बाट प्रचुर फाईदा लिन भ्याए । गत बर्षको एउटा कार्यक्रममा प्रा. डा. कटक मल्लले कोराना कालमा स्विडेनमा अध्यन\_अध्यापन कार्य एक दिन पनि नरोकीएको बरु प्रत्यक्ष भन्दा अप्रत्यक्ष तरहले शिक्षण कार्य झनै प्रभावकारी भएको कुरा सुन्न पाँउदा त्यहाँको विकास र आपतकालिन तयारीका बारेमा मलाई सोच्न बाध्य बनाएको थियो । हुन पनि हो, विकसित दुनियाँले हाम्रो जस्तो दुर्दशा बेहर्नु परेन पनि । हामीकहाँ त दिन भर जसो स्कूले वालवालिकाहरु सडक छाप भएका छन । दुर्गमका वालवालिकाहरु वनपाखा र खेतवारीमा व्यस्त छन भने सहरबजारका हरु फेसबुक, फ्रि फायर, पब्जि, टिकटक, सेल्फि, आदिमा नै लीन छन । समुदायमा यो प्रतिविम्वले झझल्को दिइरहँदा समेत राज्य पक्ष भने मुकदर्शक बनेको छ । आखिर यो कहिले सम्म?
आशा छ, कोरोनाकाल आलस्यमै बिते पनि अब उप्रान्तका सम्भाव्य आपतकालहरु उर्जाशिल बनुन । राज्य पक्ष सचेत भएर अगाडि बढ्न सकोस् । सकभर छिट्टै कोरोनाकालको अन्त्य भइ स्कूले वालवालिकाहरु लामबद्द भइ स्कूल तिर गइरहेका देख्न पाइयोस । कलेजहरु खुलुन, सरोकारवाला निकायहरु आजै बाट सम्भाब्य जोखिम न्युनिकरण गर्न तथा आपतकालको तयारि तर्फ जुटुन । कोभिड जस्तै महामारीहरु अभिशाप मात्र हैन बरदान सावित हुन सकुन, शुभकामना !!!
यस लेखका लेखक एल बि बोहरा जयपृथ्वी बहुमुखी क्याम्पसमा प्राध्यापनरत छन। हामीले यस लेखको नाम ‘कोरोना महामारी, शिक्षा र हाम्रो जिम्मेवारी ’ राखेका छौं । बोहरा दुर्गम हिमाली जिल्ला बझाङमा बिगत १६ बर्ष देखि प्राध्यापन गदै आएका छन् । कोभिड महामारीले शैक्षिक संस्थाहरुमा पारेको प्रभाव बारे धेरै कुराहरु यो लेखमा जोडिएका छन । शैक्षिक सस्था र बालबालिकामा कोरोनाले पारेको असर बारे यो लेख निकै प्रभावकारी हुनेछ। । हामी उनका थप लेखहरुलाई धारावाहिक रुपमा प्रस्तुत गर्दै जानेछौं । – सम्पादक
१५ श्रावण २०७८, शुक्रबार २१:५७ साइपाल खबर
२२ मंसिर २०७४, शुक्रबार ०६:३१ साइपाल खबर